Tatitra momba ny asa amerikana: fanarenana tsy ara-potoana ho an'ny fialamboly sy fandraisana olona
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Tatitra momba ny asa amerikana: fanarenana tsy ara-potoana ho an'ny fialamboly sy fandraisana olona
Airlines • Airport • Associations News • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Car Rental • Cruising • culinary • Entertainment • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Vaovao • People • Fitsangatsanganana an-dalamby • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Mbola misy filàna lehibe ho an'ny Kongresy hanome fanampiana fanampiny sy fisondrotana federaly hanohanana ireo orinasa miankina amin'ny dia mandra-pahatongan'ny famerenana amin'ny laoniny tanteraka - izay mitaky ny fiverenan'ny dia amin'ny raharaham-barotra sy ny dia an-tsambo iraisam-pirenena.
Navoaka tamin'ny birao amerikanina momba ny statistikan'ny asa-tanana ny tatitra momba ny asa mahamenatra tamin'ny volana septambra.
Ny sehatry ny fialan-tsasatra amerikana sy ny fandraisam-bahiny dia nahita asa vitsy nampiana tamin'ny septambra.
Ny tombom-barotra tsy mitovy dia amin'ny ankamaroan'ny viriosy misy fiatraikany amin'ny faran'ny fahavaratra.
Fitsangatsanganana US namoaka ity fanambarana manaraka ity androany momba ny tatitra momba ny asa tamin'ny septambra navoakan'ny Bureau of Statistics momba ny asa any Etazonia:
“Ny famakafakana ny asa androany dia manondro ny fanarenana tsy mitovy amin'ny sehatry ny fialam-boly tena manan-danja indrindra, izay nahitana asa vitsy nampiana tamin'ny volana septambra (74,000 XNUMX fotsiny) raha ampitahaina amin'ireo volana teo aloha izay nahitana asa an'aliny maro. Ireo tombony tsy mitovy ireo dia avy amin'ny fiovan'ny virus izay nisy fiantraikany tamin'ny dia tamin'ny faran'ny fahavaratra.
"Mbola misy filàna lehibe ho an'ny Kongresy hanome fanampiana fanampiny sy fisondrotana federaly hanohanana ireo orinasa miankina amin'ny dia mandra-pahatongan'ny famerenana amin'ny laoniny tanteraka - izay mitaky ny fiverenan'ny dia amin'ny raharaham-barotra sy ny dia an-tsambo iraisam-pirenena."
Raha ny tatitry ny asa tamin'ny volana septambra, ny toekarena amerikana dia namorona asa tamin'ny hafainganam-pandeha kokoa noho ny tsy nampoizina tamin'ny volana septambra, famantarana pessimistic momba ny toekarem-pirenena na dia teo aza ny fitontongan'ny asa goavam-be tamin'ny ankapobeny.
Ny karama tsy miankina amin'ny fambolena dia nisondrotra 194,000 monja tao anatin'ny volana, raha ampitahaina amin'ny tombatomban'ny Dow Jones 500,000, ny Departemantan'ny asa tatitra.
Na eo aza ny asa malemy dia nitombo be ny karama. Ny tombom-barotra 0.6% isam-bolana dia nanosika ny fiakarana isan-taona ho 4.6% satria ny orinasa mampiasa fiakaran'ny karama hiadiana amin'ny tsy fahampian'ny asa maharitra. Ny mpiasa misy dia nidina tamin'ny 183,000 tamin'ny volana septambra ary mahatratra 3.1 tapitrisa ny isan'ny volana febroary 2020, talohan'ny nanambarana ny areti-mandringana.
Ny tatitra dia tonga amin'ny fotoan-tsarotra ho an'ny toekarena, miaraka amin'ny angon-drakitra vao haingana mampiseho ny fandaniam-bolan'ny mpanjifa na eo aza ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny fitomboan'ny sehatry ny famokarana sy ny serivisy ary ny vidin'ny trano.